VIRURL: Ọdịnaya Nkwado na Shakekọrịta Mmekọrịta | Martech Zone
Anyị na-akwụ ụgwọ maka ụfọdụ nkesa ọdịnaya na kwụọ ụgwọ maka mgbasa ozi na na. Ọ dị mkpa ịnweta ọdịnaya anyị n'ihu ọtụtụ ndị na - ege ntị - anyị chọpụtakwara na ntinye nke dị elu na-ewetara anyị ụfọdụ ndị ọmarịcha, ndị ọbịa dị mkpa na-arapara n'ahụ. Ka Facebook na-akwalite nkwalite akwụ ụgwọ, Google na-aga n'ihu na-ebelata ala na ụlọ, na nyocha ọchụchọ na-aga n'ihu ịlụ ọgụ site n'aka ndị ọkachamara SEO na-aghọ aghụghọ, ndị na-eweta ọdịnaya ga-akwụ ụgwọ iji kwụọ ụgwọ iji obere egwuregwu ndị ọzọ.
Ọ na-ewute m ikwu ihe ahụ. Enwere m mmasị na ọchịchị onye kwuo uche ya na andntanetị na ike ya iji rụpụta nsonaazụ maka obere nwa okorobịa ahụ enweghị ike ịgafe isi na nnukwu asọmpi. Taa, ọ ka ga-ekwe omume obere ụlọ ọrụ ime ya nnukwu ntanetị - mana ka Njirimara Ntanetị na-eleba anya na ohere ọ bụla, ohere ndị ahụ na-adalata ma ọtụtụ nkwalite ụgwọ ọrụ na-arị elu.
VIRURL bụ ntakịrị atụmatụ. Kama ịkwụ ụgwọ ihe ndị a iji kwalite ozi gị, VIRURL na-agbakwunye ohere maka ndị na-eme mmekọrịta mmadụ na ibe ya ịkwụ ụgwọ iji kesaa njikọ na netwọkụ ha.
VIRURL na-ekesa akwụkwọ nkwado na vidiyo gburugburu weebụ site na webụsaịtị ama ama na ndị nwere mmetụta. Ihe anyị ji enyere onwe anyị aka na-eme ka ndị na-emepụta mgbasa ozi n'ịntanetị mepụta mkpọsa mgbasa ozi na ntanetị. A na-ejikọ mgbasa ozi VIRURL site na netwọkụ buru ibu ma na-eto eto nke ndị na-ebipụta weebụsaịtị na ndị na-emetụta mmekọrịta mmadụ na ibe ya, na-eme ka ọdịnaya onye ọlụlụ na-amụba ọtụtụ nde mmadụ nwere nnukwu aka.
A na-ejikọta ọdịnaya VIRURL nke akwadoro site na otu ndị ọrụ abụọ:
Ndị na-ebipụta weebụsaịtị, ndị na-akwado wijetị VIRURL na saịtị ha iji jeere ndị na-ege ha ntị ozi nwere nkwado dị mkpa sitere na netwọkụ VIRURL.
Ndị na-elekọta mmadụ, ndị na -ekọrịta njikọ VIRURL na ndị na-eso ụzọ mgbasa ozi ha raara onwe ha nye na ndị na-agụ blog. VIRURL na-ekwu na nwere 110,000 influencers bịanyere aka na ya.
Mara: Anyị na-anwale VIRURL ma tinyela Njikọ Anyị Akwadoro na post a.
Tags: akwụ ụgwọakwụ ụgwọ retweetsakwụ ụgwọ nkekọrịtaakwụ ụgwọ ụgwọnwa agbọghọ
Nov 25, 2012 na 11:26 PM
Daalụ maka nkwalite gị maka VIRURL.